Mohamed Salah Oo Ogolaaday In U Heshiis Cusub U Saxiixa & Reds Oo Xiddigaha MFS Heshiis Cusub Ka Saxiixanaysa – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta Mohamed Salah Oo Ogolaaday In U Heshiis Cusub U Saxiixa & Reds Oo Xiddigaha MFS Heshiis Cusub Ka Saxiixanaysa
Mohamed Salah Oo Ogolaaday In U Heshiis Cusub U Saxiixa & Reds Oo Xiddigaha MFS Heshiis Cusub Ka Saxiixanaysa
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa in ay heshiis cusub ku abaalmarin doonto xiddigooda qaab ciyaareedka fiican ku jira ee Mohamed salah xilli uu xiddiga reer Egypt ogolaaday in uu heshiis cusub u saxiixo kooxda isaga oo waliba ku faraxsan.
25 jirkan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah soo bandhigay xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay tan iyo markii uu kooxda kaga soo biiray kooxda Roma xagaagii hore uguna soo biiray kooxda Lacag dhan 34 milyan oo euro.
31-kiisa gool ayaa kooxda Liverpool ka caawiyay in ay boos fiican kaga jirto horyaalka iyada oo ugu cad-cad in ay u soo bixi doonto tartanka champions League halka uu sidoo kale fursad ugu haysto in uu si lama filaan ah kooxda Jurgen Klopp ugu hogaamiyo hanashada champions league.
Roberto Firmino, Sadio Mane & Philippe Coutinho ayaa ahaa xiddigo aan la taaban karin Liverpool bilowgii xilli ciyaareedkan markii uu salah ku soo biiray Liverpool.
Laakiin waxa uu naftiisa ka dhigay qayb muhiim ka ah kooxda Liverpool xilli uu bixitaankii Coutinho haatan ka dhigay xiddiga ugu muhiimsan kooxda.
Qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah ayaa soo jiitay kooxda Real Madrid iyada oo la sheegayo in ay ka fiirsanayso in ay dalab ka soo gudbiso xiddiga.
Si kasta ha ahaatee saxafiga IndyKaila ayaa sheegaya in ay kooxda Liverpool heshiis weyn ka saxiixan doonto xiddiga si ay kooxda ugu sii hayso.
Waxa sidoo kale la sheegayaa in ay wadahadaladu si deg-deg ah u dhamaan doonaan maadama uu Mohamed salah haatanba ogolaaday in uu heshiis cusub si farxad leh ugu saxiixo kooxda.
Salah ayaa xiddigaha Firmino iyo Mane kula biiri doona xiddigaha heshiiska cusub u saxiixi doona xilli ay kooxda Liverpool doonayso in ay hubiso in ay saddexda xiddig muddo dheer sii joogaan kooxda.